DHAGEYSO:Wakiilka haweenka ee maamul goboleedka Wajeer Fatuma Gedi Cali oo xariga ka jartay deeq waxbarasho – The Voice of Northeastern Kenya
DHAGEYSO:Wakiilka haweenka ee maamul goboleedka Wajeer Fatuma Gedi Cali oo xariga ka jartay deeq waxbarasho
Star FM February 5, 2019
Wakiilka haweenka ee maamul goboleedka Wajeer Fatuma Gedi Cali oo xariga ka jartay deeq waxbarasho oo ay dowladdu ugu talagashay in lagu caawiyo ardayda ka soo jeedo qoysaska danyarta ah sida uu ku soo warramayo Cabdiraxmaan Mucaawiye
Dhanka kale Doorashada ku celiska ee degaanka galbeedka Wajeer oo la shaaciyay xilliga ay dhaceyso
Guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudada ee IEBC ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in doorashada ku celiska ah ee xildhibaannanimada degaanka galbeedka Wajeer la qaban doono 25-ka bisha afaraad ee sannadkan.
Codbixiyayaasha degaankaasi ayaa dooranaya xildhibaan cusub oo baarlamaanka ku matalo maadaama maxkamadda ugu sarreysa wadanka ay maalmo ka hor daaqadda ka tuurtay guushii 8-dii bishii sideedaad ee sannadii 2017-dii u soo hooyatay Axmad Qaloosh.
1-dii bishan ayay ahayd markii guddiga IEBC uu qoraal soo dhigay wargeyska dowladda waxaa uuna xisbiyada kala duwan ku wargeliyay inay soo gudbiyaan magacyada musharaxiinta ku matalaya loolankaasi siyaasadeed iyo maalinta ay xulashada sameynayaan ka hor 11-ka Febraayo.
Guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka Mr. Wafula Chebukati ayaa sido kale cid kasta oo ka mid ah shaqaalaha dowladda oo doonayso inay loolan u gasho xilka xildhibaannanimada galbeedka Wajeer ku wargeliyay inay shaqada ay haysto iskacasisho muddo toddobo maalmood gudaheed ah laga soo billaabo taarikhduu guddoomiyaha baarlamaanka Mr. Justin Muturi uu ku dhawaaqay inay jagadaasi bannaantahay.
Sido kale siyaasiyiinta doonaya inay si madax bannaan u tartamaan ayaa looga baahanyahay inaynan wax xisbi ah ka tirsanaanin ugu yaraan saddex bilood ka hor xilliga la qabanayo doorashada ku celiska ah.
Musharaxiinta kala duwan ayaa laga billaabo 25-ka bishan loo ogolyahay inay guda galaan ololahooda doorasho si ay u soo gabagabeyaan 22-ka bisha afaraad , 48 saacadood ka hor codeynta.
Guddiga IEBC ayaa Joseph Leboo Masindet u xilsaaray maareynta doorashada waxaana ku xigeen looga dhigay Ibrahim Aadan Cisman iyo Qaasim Billow Aadan.
Guushii Axmad Qaloosh ayay maxkamaddu laashay kadib dacwad uu gudbiyay Ibraahim Sheekh.
Sido kale 5-ta bisha afaraad ee sannadkan 2019-ka ayuu guddiga IEBC sheegay in la qaban doono doorashada ku celiska ah ee degaanada Ugenya, Koonfurta Embakasi iyo degaanka hoose ee Lelan oo ka tirsan ismaamulka Elgeyo Marakwet.
← Kooxda Taaliban oo weeraro kala duwan ku dishay 47 qof ee dalka Afganistan
Iiran oo u hanjabtay Israel. →